Inqaku leRedmi 7: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
Inqaku leRedmi 7: Ifowuni entsha kaXiaomi
Ekuqaleni kwenyanga kwaqinisekiswa ukuba uXiaomi uza kuzisa imodeli entsha kuluhlu lwayo lweRedmi NgoJanuwari 10. Kwabhengezwa kwakhona ukuba iRedmi yayiba luphawu oluzimeleyo, ukuze uphawu lwaseTshayina lufuna ukoyisa eli candelo lentengiso. Ekugqibeleni usuku lufikile kwaye sele siyazi ifowuni entsha, okokuqala kwegama lolo hlobo. Imalunga neNqaku leRedmi 7. Isixhobo esibonakala sigqibelele kwaye ngexabiso eliphantsi.
Le Redmi Qaphela i-7 ifika njenge enye yexabiso elifanelekileyo kwiifowuni zemali Ukusuka kwimarike. Ngokuqinisekileyo iqinisekile ukuba yimpumelelo enkulu kolu hlobo lusandula ukwenziwa lweXiaomi brand. Yintoni esinokuyilindela kwesi sixhobo?
UXiaomi ulutshintshile uphawu, kodwa uyaqhubeka nokubheja kwimigaqo efanayo kolu luhlu lweefowuni. Imile ngokukodwa kwiikhamera zayo zangasemva, ikwabonisa isikrini ngokuchasene kakhulu kwaye iza nokutshaja okukhawulezayo, okunemfashini kwi-Android namhlanje. Kugqityiwe kakhulu.
1 Ukucaciswa kweRedmi Qaphela 7
2 Ikhamera njengendawo eyomeleleyo
Ukucaciswa kweRedmi Qaphela 7
Ngokwendlela yoyilo, siyabona ukuba le Redmi Qaphela i-7 ilandela iindlela zentengiso kwi-Android. Ubheje nge Isikrini esine-notch ekubunjweni kwethontsi lamanzi. Ke umphambili wesixhobo usetyenziswa kakhulu kwesi sikrini. Ngasemva sinekhamera ephindwe kabini, ethembisa ukumangaliswa. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
I-RAM: 3 / 4 / 6 GB
Inkulumbuso yoluhlobo lusishiya sinoyilo esilubona kakhulu kwimarike, njengoko sikuxelele, ngale notshi ngohlobo lwethontsi lamanzi. Inikwe njengoyilo olulungileyo, apho imibala ime ngasemva. Ukusukela ukuba uphawu lwaseTshayina lujoyina imeko yegradients, eyaziswa kunyaka ophelileyo ngesiphelo esiphakamileyo sikaHuawei.
Kufuneka kuthiwe le Redmi Qaphela i-7 izisa kuthi Ukucaciswa esingakhange sikubone kwifowuni yoluhlu. Olu luhlu oluhlala lusishiya neemodeli ezisezantsi okanye eziphakathi. Kule meko, kwipremier yayo njengophawu oluzimeleyo, basishiya neyona Redmi ibalaseleyo esele ivelisiwe ukuza kuthi ga ngoku. Uluhlu oluphakathi olunezinto ezintle, isikrini esikhulu, iprosesa elungileyo, indibaniselwano eyahlukeneyo ye-RAM kunye nokugcinwa, iikhamera ezilungileyo kunye nebhetri enkulu.
Ikhamera njengendawo eyomeleleyo
Iikhamera yenye yezinto ezinomtsalane kakhulu kule Redmi Qaphela 7. Ukusukela ngasemva kuza ne Ikhamera ezimbini ezingama-48 + 5 MP ezinendawo eyi-f / 1.6. Ke inyani kukuba kulindelwe kakhulu kwezi khamera kwisixhobo esiphakathi kwebanga. Umbuzo ngowokuba bayakulinganisa okanye hayi. Kodwa xa sijonga ukuba sibona iimodeli ezininzi nge-48 MP kwezi veki, iifoto kufuneka zibe semgangathweni.
Kwizibhengezo zamaxabiso, uphawu lwesiTshayina lwalusele lubonisa ikhamera yesixhobo. Kubonakala ngathi ikhamera ngasemva iya kusinika isisombululo esiphezulu kunye nokusebenza kakuhle ekukhanyeni okuphantsi. Kwakhona, ungakulibali oko sinobukrelekrele bokuzenzela eyandisa ezi khamera, ukuze zisebenze ngcono.
Le Redmi Qaphela i-7 sele ibhengeziwe e-China, kuphela kwentengiso apho ukumiliselwa kwayo kuye kwaqinisekiswa okwangoku. Nangona yonke into ibonisa ukuba siza kubona nomnxeba eYurophu. Kodwa xa le nto izakwenzeka yinto esingayazi ngalo mzuzu. Kulindeleke ukuba ifike ngemibala eyahlukeneyo, enje ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, omnyama, okanye opinki.
. Oko sikwaziyo ngamaxabiso efowuni ekusungulweni kwayo e-China:
Imodeli ene-3 + 32 GB: Ixabiso le-999 yuan (malunga ne-130 ye-euro ukuyitshintsha)
Inguqulelo ene-4 + 64GB: 1199 yuan of price (around 150 euro to change)
Imodeli ene-6 + 64 GB: Ixabiso le-1399 yuan (malunga ne-180 ye-euro ukuyitshintsha)
Ukongeza, inkampani iqinisekisile ukuba bayasebenza kwiRedmi Qaphela 7 Pro, eya kuthi ifike ngekhamera ye-48 MP nayo. Asazi nto ngalo mzuzu malunga nokuqaliswa kwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Inqaku leRedmi 7: Ifowuni entsha kaXiaomi
I-Google Play isusa ii -apps ezingezizo ezingama-85 ezibonisa iintengiso kuphela
Baleka umpu Ukufa ngumbono wesometri apho ufumana khona iqabane lakho